'Muslimiintu isma shukaansadaan, ee way is guursadaan' - BBC News Somali
Lahaanshaha sawirka MUZMATCH
Image caption Shahzad Younas ayaa la yimid firkradda Muzmatch xilli uu bangi ka shaqaynayey
Barnaamijka todobaad laha ah ee BBC-da ee The Boss ayaa waxaa looga hadlaa taariikh nololeedka hoggaamiyeyaal ganacsiga hormar ka sameeyey, todobaadkaan waxaa marti inoo ahaa, Shahzad Younas, oo ah aas aasaha iyo madaxa fulinta ee website-ka ay Muslimiinta guur doonka ahi kuwada xidhiidhaan iyo sidoo kale app-ka Muzmatch.
Markii Shahzad Younas uu masraxa soo istaagay waxa uu u muuqday mid ay shucuurtiisu kacsan tahay.
Laba sano kahor ayay ahayd markii 32 jirkaan hal abuurka leh ee Ingiriiska u dhashay uu magaalada San Francisco ee dalka Maraykanka kula kulmay maalgaliyeyaal heer caalami ah oo uu kala hadlayey sidii uu maalgelin ugu heli lahaa sharikaddiisa Muzmatch.
Waxa uu hal ku dhag ka dhigtay erayga ah: "Muslimiintu isma shukaansadaan, ee waan isguursannaa"
Shahzad iyo ninka ay ganacsiga bahwaaagta ku yihiin ee Ryan Brodie ayaa halkaas u tagay in ay ka qayb galaan tartan caalami ah oo ay taageerayso sharikadda maalgalinta ee Silicon Valley.
Sharikaddan Maraykanka laga leeyahay ayaa taageero dhaqaale siisa dadka doonaya in ay fikrad cusub maalgashadaan. 13,000 oo codsi oo lamid ah kan Muzmatch, ayaa lasoo gudbiyey. Waxaana qof kasta oo codsi wata lagu casuumay in uu qorshihiisa soo bandhigo.
Markii Shahzad uu hadalkiis bilaabay ayaa maalgaliyeyaashii qosol la dheceen ayagoo la yaabban daacadnimadiisa.
Sharikaddiisa Muzmatch ayaa markiiba la siiyey lacag gaadhaysa $1.5m (£1.2m),waxayna kamid noqotay 100 sharikadood ee taageerada la siiyey sanadkii 2017-kii.
Maanta sharikadiisu waxay kamid tagay kuwa ugu koboca badan caalamka waxaana iska diiwaan galiyey dad ka badan hal milyan oo qof oo ku nool UK iyo 90 dal oo kale.
Shahzad waxa uu ka shaqayn jiray bangi kuyaal magaalada London. Waana uu ku faraxsanaa shaqadiisa, balse waxa uu garowsaday in uu jiro suuq bannaan oo ah in uu sameeyo meel ay kuwada xidhiidhaan muslimiinta guurdoonka ah oo lammaanaha ay doonayaan ay ka xushaan isla bulshada dhexdeeeda.
"Waxaan ka fekeray in labo arrimood midkood la helo, Website ay muslimiinta guurdoonka ah kuwada xidhiidhaan, ama barnaamij (app) ballaaran oo lagu haasaawo dhaqankeenana wafaqsan".
Fikraddiisa ah in uu sameeyo barnaamijka Muzmatch ayaa ahayd mid uu ku doonayey in uu sameeyo bar online ah oo ay kuwada hadlaan dadka Muslimiinta ah ee doonaya in ay helaan lammaane ay guursadaan.
Dabayaaqadii 2013-kii ayaa Shahzad waxa uu waayey shaqadiisii wuxuuna ku khasbananaaday in uu sameeyo barnaamijkaas.
Image caption Ryan Brodie oo ganacsiga ay bahwadaag ku yihiin ayaa Shahzad ka caawiyey naqshadaynta barnaamijka.
Shahzad ayaa daahfuray barnaamikiisa (app-ka) 2014-kii, balse qaabka suuq gayntiisa ayaa waxoogaa ka yar duwanaa barnaamijyada haasaawaha ee waawayn.
Bilowga hore waxaa adag in aad maamushid ganacsi aad adigu leedahay, Shahzad-na waxaa bilowgii hore ku adkaaday qaabkii uu u hirgalin lahaa barnaamijkiisa cusub.
"Bilihii ugu horreeyey waxaan si joogto ah u eegi jiray Google Analytics, oo aan ka arki jiray inta qof ee App-kayga isticmaasha" ayuu yiri.
Sida uu sheegayna waxaa jirtay mar ay 10 qof oo kaliya ku xirnaayeen barnaamijkiisa Muzmatch.
Hase haatee markii dambe dadka ku xiran bartiisa ayaa noqday kumanaan qof. Wax yar kadibba dadkii waxay bilaabeen in ay Shahzad uga warramaan sidii ay isku barteen xaasaskooda ama saygooda.
"Markii aan maqlay sheekadii koowaad ee dhab ahaan u dhacday waxaan dareemay in aan guulaystay" ayuu yiri.
Ninka ay ganacsiga bahwadaagta ku yihiin ee Ryan, ee App-ka sameeyey oo 25 jir ah ayaa 2016-kii si rasmi ah ugusoo biiray.
Ayagoo wada jira ayay dib u habayn ku sameeyeen Muzmatch, kadib markii ay falcelin ka heleen macaamiishoodii hore.
Waxa ay kusoo kordhiyeen 22 su'aalood oo ay dadku waydiinayeen, sida in qofku uu diinta ku dhaqmo, in uu tukado - iyo waxyaabo kale oo macaamiishoodu ay danaynayeen.
Image caption Bangladesh
Muzmatch waxa uu xafiskiisa labaad ku leeyahay Bangladesh, wuxuuna ku hawlgalaa magaca "freemium". Waa barnaamij lacag la'aan ah, balse 10 dollar ayaad bishii bixinyasaa haddii aad u baahan tahay in aad aragtid dhammaan xogta la xiriirta dadka kale iyo in ay dad badani arkaan macluumaadka adiga kugu saabsan.
Sharikadda ayaa sheegaysa in dakhligeeda sanad laha ah uu haatan yahay £4.5m.
Shahzad ayaa sheegaya in dadka sida tooska ah ugu xidhan bartiisa ay gaarayaan 400 oo ah Muslimiin aan wali guursan oo ku kala sugan daafaha caalamka.